Madagascar National Parks: valo ny valanjavaboary mahasarika mpitsidika indrindra | NewsMada
Madagascar National Parks: valo ny valanjavaboary mahasarika mpitsidika indrindra
Valanjavaboary valo tantanin’ny Madagascar National Parks (MNP) no nahitana fiakaran’ny mpitsidika, nanomboka ny volana janoary ka hatramin’ny volana septambra lasa teo raha mitaha ny tamin’ny taon-dasa ao anatin’ny fe-potoana mitovy. “Tsy mbola tapitra ny fotoana tena mahabetsaka ny mpizahantany amin’ireo valanjavaboary ka heverina fa ho tsara ny vokatra hatramin’ny fiafarany”, hoy ny tale jeneralin’ny MNP, dokotera Rakotoarijaona Mamy. Anisan’ireo valanjavaboary mahasarika mpitsidika ny Nosy Tanihely sy i Lokobe any avaratra, Analamazaotra Mantadia any atsinanana, Ranomafana ao atsimo atsinanana, Bemaraha any atsimo andrefana ary farany, i Zombitse sy i Tsimanampetsotse ary Isalo any atsimo.
Nanomboka ny fiandohan’ny volana novambra lasa teo ny fiavian’ireo sambo mpitondra mpizahatany vahiny ho an’ny tapany avaratra. Tsy latsaky ny 200 isan-kerinandro ireo mpitsidika ny Nosy Tanihely, araka ny fanazavany ihany. Antony nisarika ny olona hitsidika ireo valanjavaboary ireo ny fampahafantarana an’i Madagasikara nataon’ny sokajin’olona maro teto an-toerana sy tany ivelany ary ny fitoniana politika misy amin’izao fotoana izao, hoy ireo mpandraharaha misehatra amin’ny fizahantany.
Niavaka ny valanjavaboary ao Isalo izay fitaratra ho an’ny fizahantany. Nitombo 16% ny isan’ny mpitsidika, nandritra ny 10 volana voalohany tamin’ny taona raha ampitahaina tamin’ny taona 2018. Midadasika amin’ny velarana 80 000 ha ny valanjavaboaory ao Isalo ahitana tontolo isan-karazany. Noho ny fitomboan’ny mpizahatany, 16 ny toeram-pandraisana raha valo izany, ny taona 2008. Namorona asa koa ny fivoaran’ny tontolon’ny fandraisam-bahiny sy ny fizahantany. Misokatra mandavan-taona rahateo ny valanjavaboary ao Isalo. 100 ny mpitaridia mandray ny mpitsidika amin’ny « circuit » maro.